News - Sports myanamr
အဆင့် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရွှေဘောလုံးဆု အတွက် ရေပန်းစားမှု . . . ဘယ်သူ နံပါတ် ၁ လဲ ?
ဘောလုံးရာသီသစ် စတင် လာခဲ့တာ အချိန်အားဖြင့် ၁ လ ကျော်ခဲ့ ပါပြီ ။ နိုင်ငံ တကာ ပွဲစဉ်တွေ ကြားဝင် ခဲ့တာကြောင့် အခုချိန်မှ အမှတ်ပေး ပွဲစဉ် ၅ ပွဲသာ အများဆုံး ကစား ထားကြ ရပါသေးတယ် ။ ချန်ပီယံလိဂ် ၊ ယူရိုပါလိဂ် နဲ့ ကွန်ဖရန့်လိဂ် ပွဲစဉ်တွေ …
ကြားရက်မှာ ကစားမယ့် ပွဲကောင်း ၄ ပွဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် ကြားရက်တွေ တုန်းက ဥရောပ ပွဲတွေ ကစားခဲ့ကြသလို ဒီတပတ် ကြားရက် တွေမှာလည်း ပွဲတွေ ရှိနေပါတယ် ။ အင်္ဂလန် မှာ ကာရာဘောင် ဖလား တတိယ အဆင့် ပွဲစဉ်တွေ ကစားကြမှာ ဖြစ်ပြီး စပိန် ၊ အီတလီ နဲ့ ပြင်သစ် လိဂ် တို့မှာလည်း အမှတ်ပေး …